အလုပ်ခန့် တဲ့ပုံစံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အလုပ်ခန့် တဲ့ပုံစံ
Posted by phone_kyaw on Jun 19, 2012 in Copy/Paste | 18 comments
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးရှိတယ်။ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ သူတို့ နှစ်ဦးက အသက်အရွယ်လည်း သိတ်မကွာဘူး။ သူတို့ နှစ်ဦးရဲ့ တန်ဖိုးကို လေလံပစ်တဲ့အခါမှာ ဦးသိန်းစိန်ရှုံးပြီး ဒေါ်စုနိုင်တာကို ယနေ့ ဥရောပခရီးစဉ်မှာ အထင်အရှားမြင်ရတယ်။
ဘယ်တုန်းက ဦးသိန်းစိန်ကို ဘိုနိုက ဂျက်လေယျာဉ်ပေးခဲ့ဘူးလဲ။ ဘုရင်ခံတွေနဲ့ ထမင်းအတူစားဘူးလား။ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုမပြောနဲ့ လူ့ အခွင့်အရေးဆုတောင်ရဘူးလို့ လား။ ဒီလိုမျိုးမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကို နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်သမ္မတအဖြစ် ထားတဲ့လူတွေကို အရမ်းအံ့သြမိတယ်။
အူးလေး … ကျနော် ဖတ် ရင်းနဲ့တောင် လည် လာ ပြီ ခင် ည …
အရင် ပိုစ့်တွေမှာ က အူးလေးကို ကြီးမေ ဘက် က မဟုတ် ၀ူးမ လာ… ( ကြ်ီးမေ> credit to ko inzaghi)
ဒီတခါကျတော့လဲ ဘက်ပြောင်းသွားပြန် ပီနော် ..သိပ်မျက် စေ့ လည်အောင် လုပ် တည်…
တော်ပြီ နီးစပ် ရာ မခန့်ေ တာ့ ဘူး အော် ဇီ က ကဖုန်းကျော် ကို ပဲ ခန့်် တော့ မယ်… အူးလေး တမတ တက် လုပ် ပါ လား ဟင်… ဟီးဟီး အူလေး တမတ ဖြစ် ရင် ဟို လိုက်တူး ဒီလိုက် တူး မလုပ် နဲ့ နော်…
သည်းခံ ပါ ခင် ည
အလုပ်ခန့်တဲ့ ပုံစံကိုတော့ သိပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်က အလုပ်ရှင်နေရာကို ရမထားဘူး ဆိုရင်ကော……….
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ဆုတောင်း အဖြစ်တင်တာလား ????? :grin:
Bloody ဘန်းကျော်တို့များ တင်လိုက်တဲ့ပို့စ်တိုင်းမှာ တစ်တစ်ခုတော့ ပြောချင်စရာကို ပါနေတော့တာပဲ..
ဘာတဲ့… အောင်မာ.. ငါတို့အမေကိုများ ” ဒေါ်စုလို ကလတ်တတ်တတ် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကို” တဲ့..
ဟေ့လူ .. ဘဲကြီး… အဲဒါ ကလက်တာ မဟုတ်ဘူးဗျ…. သွက်လက်ဖြတ်လတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်…။
ဗမာဖြစ်ပြီး ဗမာစကားကို လူဟားလို တိုင်းရင်းသားလောက်တောင် မသုံးတတ်ဘူး…။
ဒါလေးတစ်ခုကလွဲလို့… ပို့စ်တစ်ခုလုံးကို လက်မထောင်တယ်ဗျို့(ပြန်ချော့တာ….ဒက်ကလောက်… ဒက်ကလော်…)..။
ဝတ်ဒယ် အောက်ကဟာကို ကန့်ကွက်တယ်
( ဒေါ်စုလို ကလတ်တတ်တတ် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကို ကြည့်ရရ မရရ
တိုင်းပြည်မှာ အာဏာအရှိဆုံးတာဝန်ကို ပေးသင့်တယ်လို့ မြင်တယ်။ )
လွန်ခဲ့ဒဲ့အချိန်ဒွေဒုန်းဂဒေါ့ အဖွားဂျီးဂို စစ်အုပ်စုတွေက
ခနဲ့တဲ့တဲ့ ပြောတတ်တဲ့ ဘာညာကွိကွ အပုတ်ချကြဒါဘဲ
ခင်ဗျားဂ ခွီး ဒဲ့မှ ကလတ်တတ်တတ် ဒဲ့
သူက ခေါင်းဆောင်လုပ်မယ်လို့ပြောမှ ကျနော်တို့က သဘောတူပါတယ်ဝိုင်းပြောရမှာလေ.။
အဲတော့ သေချာတဲ့အချိန်ထိ ကျန်းမာချမ်းသာအောင် ရှိနေဘို့ ကတော့ အလိုအပ်ဆုံးပါဘဲ။
ကိုယ်တွေက ခေါင်းဆောင်လုပ်ပါဆိုမှ သူက လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလား…သူက ခေါင်းဆောင်လုပ်မယ်လို့ ဘယ်ပြောမှာလဲ… စောင့်နေပါမယ် next election!!!
အောင်မလေး ကဘုန်းကျော် …
ဒီအကောင့်ကို လူဘယ်နှစ်ယောက်သုံးနေတာလဲဟင် … ။
အရက်မသောက်ရလျှင် စိတ်က တမျိုး ၊ အရက်သောက်ပြီးရေးလျှင် စိတ်က တမျိုးလား …
အရင်ကတော့ အမေစု အကျီ င်္ထည်လဲဝတ်တာက အစ ကြည့်မရဘူးဆိုပြီး မျက်မှန် စိမ်းတပ်ထားတဲ့ လူ .. အခု … စိတ်ပြန်မှန်သွားပုံရတယ် … ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အမေကျော်ဒွေးတော်လွမ်းတဲ့ စိတ်တွေပျောက်သွားတာ ၀မ်းသာစရာပါပဲ
ကိုဘုန်းကျော်ရေ …. ။ အစိုးရအနေနဲ့ အမေစုက အဖိုးတန်လူသားမှန်း သိခဲ့လို့လည်း … အရင်ကအကြံတွေ အကုန်ဘေးဖယ်ပြီး … အခု အစိုးရအသစ်အနေနဲ့ … အမေစုနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး လုပ်ဆောင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလား … ။ ဒီအတိုင်းကြီးတော့ … ဘုရင်မ ဘယ်လုပ်ခိုင်းပါ့မလဲ …. သိက္ခာတွေ၊ ဂုဏ်ထူးတွေအမောပြေနားဖို့ သူတို့အတွက် ထိုင်ခုံလေးတော့ … ရှိထားရဦးမယ်မဟုတ်လား … ။
အမေစု ကို ကလတ်တတ်တတ် ပြောရင် ကျန်တဲ့လူဒွေကိုကော ခင်ညားကြီး ဘယ်လိုပြောမှလဲဂျ။ ဘယ်နားမှာများ အဲ့လိုဖြစ်နေလို့လဲ
ကိုဖုန်းကျော်ရေ.. ကြိုက်သွားပြီ… နိုင်ငံတိုးတက် ဖို့ဒီလို ပြတ်ပြတ်သားမြင်တာ ကောင်းပါတယ်..
သို့သော် သူ ဒီလိုသွားလို့ ရအောင် သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ .. တကယ်ဘဲ သမ္မတကပေးသလား ?(သို့)
မတတ်နိုင်လို့ ခွင့်ပေးလိုက်ရတာလားဆိုတာ ကတော့ စောင့်ကြည့် ဖို့လိုမယ်…
စောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ တခုလေးတော့ မြင်မိတယ်… မြန်မာ့ အသံမှာ တခြား လွတ်တော် ကိုယ်စလှယ်တွေ
ဘာလုပ်တယ် ဆိုတာကြတော့ ပြပြီး ဒေါ်စုကိုကျတော့ လုံးဝ မဖေါ်ပြတာ …သိန်းစ်ိန်ကဘဲ မပြချင်တာလား?
ဒေါ်စုကို မနာလိုတဲ့ လူတွေကဘဲ မဖေါ်ပြတာလား?
အပြောနဲ့ လက်တွေ့ တစ်ထပ်တည်း မကျတာကို ကြည့်ရင်တော့ …အေး…နောက်ကွယ်မှာ များ ..တခုခု
အမိန့်ပေးတဲ့ လူရှိနေလေဦးမလားလို့ တွေးနေမိတယ်…
ဟိုဘက်မှာရပ်နေတဲ့သူတွေ ဒီဘက်ကူးလာတာလဲကောင်းပါတယ်။ နို့မို့ဟိုဘက်ကနေ အသရေဖျက်နေတာ ထက်စာရင်ဒီဘက်မှာဆိုတော့နဲနဲသက်သာတာပေါ့။ လာပါစေ။
တကယ်တော့ အလုပ်ရှင်ဆိုတာ` ပြည်သူတွေပါ´
ပြည်သူတွေက ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ စိစစ်ရွေးချယ်ပီးခန့်ရတာပါ..
၂၀၁၀ တုန်းက အန်တီစုမပါလို့ ပြည်သူတွေအောင့်သက်သက်နဲ့မခန့်လိုက်ရတာပါ..
အစိုးရခေါင်းဆောင်ထက် လူထုခေါင်းဆောင်က မိုမြင့်မြတ်ပါတယ်..
တာဝန်လည်းပိုကြီးပါတယ်…ဒီလောက်ဆို အန်တီစုကို သဘောပေါက်မှာပါ…
ကဘုန်းကျော် ကတော့ မပြုံးဘဲ မနေနိုင်အောင် အမြဲ ရေးတတ်ပါလေ့။
တစ်ခု ဝင် ပြောချင်ပါတယ်။
တစ်ခြား မသိတဲ့ လူတစ်ယောက် ဆိုရင် ဝင်ပြောဖြစ်ချင်မှ ဝင်ပြောပါမယ်။
ရှင့်ကိုတော့ ဝင်ပြီး ပြောရဲလို့ပါ။ ;-)
လူတစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် ကို အလွယ်ပြောပြီး မနှိုင်းယှဉ် သင့်ပါဘူး။
သူကြီးပြင်းရတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်၊ နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း၊ သူ့ရဲ့ ဇီဝဗီဇ တွေ ပေါ် မူတည်ပြီး ဘဝ ရပ်တည်မှု နဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား ကွဲလွဲကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ခါ ဘဝရပ်တည်မှု တူပေမဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား မတူသူတွေ ရှိသလို
ဘဝရပ်တည်မှု မတူပေမဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား တူသူတွေ လဲ ရှိပါတယ်။
ဒီနေရာ မှာ ဦးသိန်းစိန် နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ ဘဝရပ်တည်မှု မတူခဲ့ကြပေမဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား တူသူတွေ လို့ ကျွန်မ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း နဲ့ ဦးသိန်းစိန် ကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း မတူခဲ့ လို့
ရှင်ပြောတဲ့ အချက်တွေ ပေါ်မူတည်ပြီး ဒီလိုမျိုး တော့ မနှိုင်းသင့်ပါဘူး။
ဦးသိန်းစိန် ဟာ သူ့ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေမှာ အခက်အခဲ တွေ ကြားမှာ အတော်လေး အတိုက်အခံ လုပ်ပြီး တိုင်းပြည် နဲ့ ပြည်သူတွေ ကောင်းဖို့အတွက် ရပ်တည် ပေးနေတယ်လို့ လဲ ကျွန်မ ယုံကြည်ပါတယ်။
အခွင့်သာစဉ် ကိုယ့်အိတ်ထဲ အားပါးတရ ထည့်ပြီး တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာ ကိုယ့်ဟာ လုပ်နေတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း ကြားမှာ ထူးထူးခြားခြား ရိုးသားစွာရှိနေ ခဲ့ခြင်းကဘဲ
သူ့အတွက် ကျွန်မတို့ ဂုဏ်ယူ ကြရပါမယ်။
ဒီလို သမ္မတ မျိုး ကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်ကလဲ ဂုဏ်တက်ပါတယ်။
အခုအချိန် မှာတော့ ကျွန်မ စိတ်ထဲမှာ သူတို့ နှစ်ယောက် လုံး သူ့ ဂုဏ် နဲ့ သူ တင့်တယ် နေပါတယ်။
ကျွန်မ လဲ ထီအမြဲ ထိုးနေပါတယ်။
သန်းထီကြီးများပေါက်ခဲ့ရင် ဘိုနို က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လေယာဉ် ပေးသလို ကျွန်မ လဲ သမ္မတကြီး ကိုပေးဖို့ပါ။ :-)
ဒါနဲ့ အရင် Post က အကြောင်းကို လဲ ဒီမှာ ဆက်မန့် ချင်ပါတယ်။
မနေ့ က ဘိုနို က ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကို
ကမ္ဘ္ဘာ့ နေရာတိုင်း ဟာမင်းအိမ် ဖြစ်လာပါပြီ။
ဒီနေ့ညနေ မှာတော့ ဒဘ်ဘလင် ဟာ မင်းရဲ့ ကမ္ဘ္ဘာ ပါဘဲ တဲ့။
“It is one of the great ironies that by your confinement, the world has become your home.
Dublin is your world this evening.”
ကျွန်မ တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ကျွန်မ တို့ မြန်မာပြည် ရဲ့ ခေါင်းဆောင် အဖြစ်တင်မကဘဲ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းဆောင်ပါဖြစ်ဖို့ လောဘ တက်နေပါတယ်။
သူ အဲဒါတွေ ကိုပါ စဉ်းစား လုပ်နိုင်ဖို့ မြန်မာပြည် တိုးတက်အောင် သူ့ကို တစ်ယောက်ထဲ ပုံမထားဘဲ ကျွန်မတို့ အားလုံးလဲ သူ့ကို ဝိုင်းဝန်း ကူညီ ပံ့ပိုး ကြဖို့ လိုကြောင်း လေးလဲ ပြောချင်ပါတယ်။ :-)
“ကလက်တက်တက်” ဆိုတာ ကတော့ ဘာကို ရည်ရွယ်တယ် ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ ကိုမရပါ။
ထက်မြက် တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ ကြည့်ရတာ အမြဲ ဖျတ်လတ် သွက်လက် နေမှာပါဘဲ။
100% ထောက်ခံပါတယ် မလတ်ရေ။
အချိန်အခါကို လိုက်ပြီး အပြောအဆိုတယ်လဲ ပြောင်းလွယ်တယ်နော်။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ သမ္မတကြီးလည်း ပြောင်းလဲချင်းတွေကို လက်ခံပြီး ကြိုးစား လုပ်ဆောင် နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ အစိုးရအဖွဲ့မှာ ရှေးရိုးစွဲတွေရှိနေတော့ ခရီးမတွင်ဘူးဖြစ်နေတာပါ။ အကောင်းမြင်ဝါဒလေးနဲ့ကြည့်ပြီး ၂၀၁၅ မှာကျင်းပမဲ့ အထွေထွေရွှေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်စုပါတီ -NLD အနိုင်ရဖို့ အခုအချိန်ကတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒေါ်စု၏ ဤမွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ် ၁၀၀ တိုင် စိတ်ရော၊ ကိုယ်ပါ ကျန်းမာ၍ ပြည်သူတွေအကျိုး ဆထက်တိုး၍ ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေ လို့ဆန္ဒပြုပါတယ်။